Drugwar battle စတိုက်ခြင်း — Steemit
Drugwar battle စတိုက်ခြင်း
domelay (61) in steemit • 19 days ago
Drug war game လေး ဒီနေ့ စပြီး battle ဆိုင်လို့ ရတဲ့နေ့ပေါ့ဗျာ ။ ကျွန်တော်တို့မှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ battle နဲ့ မတွေ့ဖူးသေးတော့ စတင်ပြီး စမ်းသပ်ကြတာပေါ့ ။ ပထမဆုံး ကိုဒုန်ကို ဝင်တိုက်လိုက်သည် ။ ဆယ်မိနစ် စောင့်ရမည်တဲ့ ချက်ချင်းရပြီး တဲ့ကိစ္စကို ဆယ်မိနစ် စောင့်ရတော့ နည်းနည်းတော့ တင်းသွားသည် ။ လူကလည်း တိုက်ချင်နေပြီလေ ။ ထိုဆယ်မိနစ်မှာ အခြားသူက online ဖြစ်နေလျှင် ပြန်လည် ခုခံစရာ အကောင်များ ထုတ်နိုင်အောင် ထားပေးခြင်း ဖြစ်နိုင်သည် ။
ပထမဆုံး ကိုဒုန်နဲ့ တိုက်လိုက်သည်မှာ ကျွန်တော် နိုင်သွားသည် ထင်သည် ။ LOST ဆိုသော စာလုံးမှာ ကိုဒုန်ဘက် နည်းနည်း ကပ်နေသည် ။ နောက်မှ သိရသည်မှာ ကိုနိုင်လျှင် WIN ဆိုပေါ်ပြီး ရှုံး လျှင် LOST ဖြစ်ပါသတဲ့ ။
ကိုသက် ကျွန်တော့ကို တိုက်တဲ့အခါ ထို ဆယ်မိနစ် အတွင်းတွင် ထုတ်ထားသော အကောင်လေးများ ပါသွားလေသည် ။ အခြားသူများ၏ ပထမဆုံး အတွေ့ အကြုံကတော့ အဘယ်သို့ ရှိမည် မသိပါ ။ ကျွန်တော်ကတော့ မစွံ W တွေ A တွေ သာ အကုန်ခံပြီး ထုတ်တိုက်လိုက်ရတယ် ကိုယ်က ရတယ်လို့ မရှိ နိုင်လိုက်တာတောင် တစ်ပြားမှ မရ အခြေနေဆိုတော့ ။ လောလော ဆယ်တော့ အကုန်ဘက်ကဖြစ်နေပါသေးသည် ။
အစကတော့ battle မလုပ်ဖြစ်လောက်ဖူး ထင်ပေမဲ့ ခုတော့ လုပ်ဖြစ်သွားသည် ။ နောက်လုပ်ဖြစ် မလုပ်ဖြစ် ဆိုသည်ကိုတော့ အသေအချာ မပြောတတ်သေးပေ ။ ခုလောလော ဆယ်တော့ ဘာမှ လုပ်မရ ဘယ်ကမှ မတက်တေသာ နေရာတွင် DRUGWAR ကြီး မိတ်တုန် မိတ်တုတ် ဖြင့် ရပ်တန့်နေလေသည် ။ ထိုသို့ ရပ်နေသဖြင့် လိုချင်သော ပုံလေးများပင် မယူရနိုင်ပါ ။
steemit drugwar game story
19 days ago by domelay (61)
lwinoomg (49) · 19 days ago
နာ့လာတိုက်​ဘာမှမရှိဘူး ပြန်​လဲမခုခံဘူး စိတ်​ချမလုပ်​တပ်​လို့
domelay (61) · 19 days ago
မရှိတဲ့သူကို အရှုံးခံပြီး မတိုက်ပါဘူးဏော်
castielzawzaw (35) · 19 days ago
7.083 STEEM from daily
0.351 STEEM from heist
First transfer was before 14.73 days.
Your ROI per day is 2.18 % and you are earning approx. 0.50 STEEM per day.
thatkozaw (58) · 19 days ago
Sorry ဒိုမီ ဘာစမ်းလို့စမ်းရမယ်​မသိ​တော့
အဲ့လိုလေး တိုက်မှ အကြောင်းသိမှာပါ ဥဥရယ်
donjaun (61) · 19 days ago
ကသက် သတိရပုံကြီးကလည်းကွာ နော့် ဒိုမီ
ကိုယ့်ကို တိုက်မှာမလို့ ဆယ်မိနစ် auto စောင့်ခိုင်းထားတယ်။
domelay (61) · 18 days ago
ဟုတ်တယ် တစ်ခါတစ်လေ မိနစ် နှစ်ဆယ် လောက်ပါ ရောက်တယ်
htwegyi (58) · 19 days ago
တို့တော့ မသိလို့မလုပ်ဘူးဝေ့ မျက်စိလည်းမကောင်းတော့ မကလိရဲဘူး။
မက် စိ ကတော့ ဂရုစိုက်ပါ ဦးဦး ကျွန်တော် တို့လဲ ဖုန်းနဲ့ မျက်လုံး မခွဲသော ချစ်သူတွေ ကျနာဘဲ
share2steem (65) · 18 days ago
Hi domelay ! You just received an upvote from @share2steem !
To our deep regret, it looks like you signed up on Share2Steem but never posted through the application.
Daily Upvote from the Share2Steem account (82189 SP and growing with an upvote value worth up to $2.01)
honeysara (60) · 12 days ago
အချင်းချင်းတွေ မတိုက်ကြပါနဲ့ဟ....နိုင်ခြံကားက လူတွေကိုချပစ်။
domelay (61) · 12 days ago
ဟုတ် မတ်မတ် ခုတော့ စစ်တပ်တေ ပိုင်ကုန်ကြပြီ